Heshiiskii Berbera oo si rasmi ah loo dhameystiray (Aqri sagaalka qodob) - Caasimada Online
Home Warar Heshiiskii Berbera oo si rasmi ah loo dhameystiray (Aqri sagaalka qodob)
Heshiiskii Berbera oo si rasmi ah loo dhameystiray (Aqri sagaalka qodob)
Abu Dubai (Caasimadda Online) – Wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici ayaa ku sugan Magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta, iyagoo halkaas u tagay arrimo ku saabsan heshiiskii Berbera.
Haddaba waxaa maanta si rasmi ah heshiis ka koobnaa ilaa 9 qodob wada saxiixday dowladda Imaaraadka Carabta iyo Maamul Goboleed Somaliland, waxaana heshiiskaas kamid ah heshiskii Saldhigga Imaaraadka ee Magaalada Berbera kaasoo muran badan ka dhex dhaliyey dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Haddab Caasimadda Online ayaa heshay qodobadii lagu heshiiyey oo aan si rasmi ah saxaafadda loogu soo bandhigin maadaama ay jirto xasarad weyn oo ka dhalastay arrintaan.
Somaliland waxay Dowladda Imaaraadka Carabta u ogolaaday inay isticmaasho Garoonka Diyaaradaha Muqdisho isla markaasna ay ka sameysato Saldhig Militari.
Imaaraadka Carabtay waxay Berbera ka dhici doonaan garoon kale oo diyaaradeed si ay u isticmaalaan dadka rayidka ah.
Imaaraadka waxay dhisi doontaa isla markaasna bilaabi doonto mashruuca Jidka isku xira Berbera iyo Togwajaale oo dheerarkiisu yahay 250km.
Imaaraadka waxay Somaliland ka fullin doontaa mashaariic ku saabsan Biyaha, Tamarta , Caafimaadka iyo waxbarashada, waxayna ballan qaaday inay 3 sano gudahood ku fullin doonto Mashaariicdaas.
Dowladda Imaaraadka waxay shaqo siin doontaa dadka ku abtirsado Maamulka Somaliland.
Dowladda Imaaraadka waxay caawisaa shirkadaha Somailand ka sameysanayo mashaariicda iyo maalgashiga.
Imaaraadka Carabtay waxay Somaliland ka caawin doontaa Xagga amniga iyo nabadgalyada.
Wuxu heshiiskan albaab cusub u furi doonaa Somaliland iyo Beesha Caalamka.
Imaaraadka Carabtay waa inay gargaar bini’aadanimo oo deg deg laasoo gaartaa dadka kasoo jeedo Somailand oo ay saameysay abaarta.
Heshiikaas ayaa waxa dhinaca Somaliland u Saxiixay Sacad Cali Shire oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, halka Imaaraadka uu qalinka ugu duugay Maxamed AL-Zuweydi.